Rakhine – The European Rohingya Council
သတင်းထတ်ုပြနခ်ျက် ၂၀၁၉ ခုနှုစ်၊ ဒီဇငဘ်ာ (၁၈) ရက်။ ရိုဟင်ျာ (၉၅) ဦးကုပြနလ်ညလ်ွှတ်ေပးပြီး ယင်းတ့၏ုမူလဌာနေသု့ပြနပ့်ရုန် တောင်းဆုခြင်း မြန်မာုနုင်ငံတွင် ရို ဟင်ျာတ့အုပေါ် လူမျးတုံးသတ်ဖြတသ်ည့က် စ္စ နယသ်ာလန်ုနုင်ငံ၊ သညဟ်ဲ်မြ့ ရှုနုင်ငံတ ကာ တရားရိုးံ၌ ကြားနာနေစဉ်၊ုနုဝင်္ဘာ (၂၉) ရက်ေန့တငွ် ဧရာဝတတီုင်း၊ ပုသမ်မြ့ နယ် ကမ်းခြေတငွ် ဖမ်းဆီးခဲ့ ပြီး၊ ယခအုခါ တရားရိုးံတွင် […]
THE ERC’S STATEMENT ON THE INDONESIAN ENVOY TO MYANMAR On February 9, an envoy led by outgoing Indonesian Ambassador to Myanmar Ito Sumardi visited Taung Pyo Letwea, Nga Khu Ya and Hla Pho Khaung in northern Rakhine State, Myanmar where reception centers were built for the repatriation of Rohingya refugees. He claimed that […]
PRESS STATEMENT European Parliamentarians: Press Myanmar to Stop Violence and Ethnic Cleansing against the Rohingya [12 February 2018, Brussels] – On Mondayadelegation from the European Parliament will visit Myanmar and Bangladesh to discuss the Rohingya crisis. Commenting on the visit, Dr Anita Schug, Spokesperson of the European Rohingya Council said, “This is […]